Filtrer les éléments par date : vendredi, 23 février 2018
vendredi, 23 février 2018 16:49
Toamasina: Karohina ilay kolonely lehiben’ny mpanamboatra sy mpanaparitaka vola sandoka
Miparitaka ny vola sandoka, ary saika amin’ny faritra rehetra no ahenoana fitarainana. Ny vola vaovao 20.000 Ariary sy 10.000 Ariary no tena miparitaka, ka ny tantsaha no tena lasibatra amin’ny afitsok’ireo milaza ho mpividy vokatra. Nahitana izany tany Mahanoro, Vatomandry, Toamasina II, Vavatenina, Fenoarivo Atsinanana sy ny manodidina, indrindra amin’izao fotoana fiakaran’ny jirofo izao.
Nanao bemidina ny polisy avy amin’ny hery vonjy taitra (FIP) eto Toamasina androany nanao savahao sy hazalambo ireo mpanamboatra sy mpanaparitaka vola sandoka eto Toamasina, niainga tamin’ny loharanom-baovao avy amin’ny tsara sitrapo voarain’izy ireo. Vokany, dia olona miisa 11, ka vehivavy ny 02 no nosamborina tao Tanambao V, Ankirihiry, Tsarakofafa, ary Mangarivotra.
vendredi, 23 février 2018 16:16
Rajaonarimampianina, se veut être le grand ami des Karana
Le week-end dernier le président Hery Rajaonarimampianina a quitté le pays en catimini, sans que les services de communication de la présidence n’aient donné la moindre explication qu’après son retour, il est revenu dans la nuit du mardi 20 février, toujours dans la plus grande discrétion. Mais le jour d'avant, il a été vu au Marché de Rungis, près de Paris !
A-t-il fait ce bref séjour « secret » afin d’acheter des fleurs à sa femme ?
Rappelons que le marché d’intérêt national de Rungis se situe à 7 km de la capitale française avec plus de 600 hectares de superficie. Ce marché est la propriété de l’Etat français, géré par une société d’économie mixte: Société anonyme d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis (Semmaris).
vendredi, 23 février 2018 16:05
Sambava: Tena misy fantsika ny lavanila amidy amin’ireo mpandraharaha
Androany maraina, nandritra ny fitsidihan’ny Minisitry ny varotra sy ny fanjifana, Chabani Nourdine, ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila no nanambaran’ireto farany tamin’ity iraky ny governemanta ity ny zavatra iainan’izy ireo. Misy fantsika ny lavanila voavidin’ireo Collecteur izay omen’ireo mpandraharaha vola hividianana lavanila any amin’ny mpamokatra.
Mitombo lanja ny lavanila misy fantsika nefa dia famotehana ity lalam-pihariana ity izany. Ary tsy lavanila maitso no misy io fantsika io fa ny lavanila efa masaka haondrana any ivelany.
Mba hisorohana ireo lavanila misy fantsika tsy ho tonga any ivelany dia voatery nividy fitaovana fitsirihana ireo lavanila rehetra tonga izahay, hoy ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila. Mitaraina ho idiram-patiantoka ireto farany amin’ny fisian'izao zavatra mahamoa fady izao.
vendredi, 23 février 2018 15:50
Ambatovinaky-Antananarivo: Misy vato lehibe ahiana hikorosy koa
Taorian’ny filatsahana vato be, izay nahafatesana olona fito, teny Ampamarinana Boriborintany faha-4 Antananarivo, ny alin’ny sabotsy 17 febroary dia nahazo fanairana avy amin’ny manodidina indray ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ny alin’ny alakamisy 22 febroary 2018 fa misy bolongam-bato be ahiana ianjera ety amin’ny Fokontany Ambatovinaky, Boriborintany voalohany.
vendredi, 23 février 2018 15:36
Antalaha: Nomena fiara be setroka ny Polisy nisava lalana ny Minisitra
Nanaitra ny maro ny nahita ny toe-javatra teto Antalaha androany fa fiara manetroka be no nomena ny Polisy mba hisava lalana nitarika ny Minisitra ny varotra sy ny fanjifana, Chabani Nourdine, izay manao fitetezam-paritra aty SAVA, mba hijerena vahaolana maika momba ity fiakaran’ny vidin’ireo entana ilain’ny mponina andavanandro (PPN) ity.
Zao tolak’andro izao dia hitafa amin’ireo mpandraharaha izay voakasik’ity PPN ity ny Minisitra ka nisantarana izany ny fijerana ny zava-misy eo anivon’ny seranan-tsambon’Antalaha izay mampiditra vary afarana any amin’ny 2.000 taonina isam-bolana eo ho eo.
Fehin-kevitra tapaka tao Sambava androany maraina kosa ny hoe : tsy tokony hihoatra ny 85.000Ar ny iray gony amin’ireo vary afarana tonga eny amin’ny mpanjifa.
vendredi, 23 février 2018 15:25
Soarano: Ady amin'ny kolikoly
Notontosaina omaly alakamisy 22 febroary tetsy amin'ny café de la gare Soarano ny fanolorana marim-pankasitrahana ho an'ireo nahavita fiofanana mahakasika ny indice de Perception de la corruption 2017, na ny ady amin'ny kolikoly.
Nisy ny fampahafantarana ny momba izany izay narahana fanontaniana sy ady hevitra.
vendredi, 23 février 2018 15:16
Antsirabe: Jiolahy niisa 6 no indray saron’ny polisy
Fanomezam-baovao avy amin’ny tsara sitra-po no nahitana ny vokatra raha ny nambaran’ny Contrôleur Général de la Police Ramilison Célestin, lehiben’ny Polisy eto Vakinankaratra. Nambarany fa nandritra ny fanadihadiana dia niaiky ny asa ratsy nataony izy ireo, toy ilay nitranga ka nahafaty olona teny akaikin’ny Socolait Ambohimena sy ireo teny Andranomandevy sy ireo fanafihina nisesisesy teto Antsirabe.
Ny iray tamin’ireo jiolahy dia efa nigadra 20 taona am-ponja noho ny vono olona niniana natao, saingy vao nahavita 9 taona dia tafatsoaka ny fonja hatramin’ny taona 2016 ka izao hita izao indray.
vendredi, 23 février 2018 15:09
Trésor Antsirabe: Miveri-maina ireo mpiasam-panjakana maka vola
Tranga nisesy tato ho ato tao amin’ny Trésor Antsirabe ny tsy fahampiam-bola na ny tsy fisiana mihitsy aza, hany ka miveri-maina ny olona tonga haka vola, toy ireo mpiasam-panjakana izay anatin’ny fandraisan-karama amin’izao.
Vao maika niampy trotraka ihany koa rehefa noraofin'ny Faritra Vakinankaratra handoavana ny karaman'ny sefo Fokontany avokoa ny vola. Noho ny tsy fahampiam-bola io aza dia tsy ampy handoavana ny karama 18 volan'ny sefo Fokontany amin'ireo distrika rehetra aty Vakinankaratra ny vola fa ampahany fotsiny indray.
vendredi, 23 février 2018 14:31
Sambava: Arahi-maso ny vidin-javatra
Tonga ny maraina teo aty Sambava ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, Chabani Nourdine, hijery akaiky ny zava-misy mitarika ny fiakaran’ny vidim-piainana mihopampana ankehitriny, izay mampikaikaika ny mpanjifa.
Avy hatrany dia nidina teny amin'ny tsena sy ireo magazay fitehirizam-bary ny tenany, nanadihady inona no olana mahatonga ny fiakaran’ny vidiny, izay efa tafakatra 95.000 Ariary ny gony amin’ireo vary afarana avy any ivelany raha tonga any amin'ny mpaninjara.
Fandaharana Vahaolana miaraka amin'i mpanao Gazety Britto ny alahady 25 febroary 2018 ao amin'ny Top Radio FM 102.8 amin'ny 01 ora atoandro.
Famakafakana ara-politika, toe-karena, sosialy, programan'asan'i Kandida ho Filoham-pirenena Patrick Raharimanana.